Kuthetha ukuthini ukuphupha ikhabethe? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Ukuphupha ikhabethe
2 Kuthetha ukuthini ukuphupha ikhabethe?
3 Beka iimpahla ezintsha
4 Khulula iimpahla ezindala ...
5 Iimpahla ezikrazukileyo
6 Iphupha lekhabethe evaliweyo
7 Gcina iimpahla zakho zicocekile.
8 Gcina iimpahla zakho zigcwele
9 Gcina iimpahla zakho zingcolile
10 Gcina iimpahla zakho zilungelelanisiwe
11 Umntu ongaphakathi egumbini
12 Ngaba ukuphupha ikhabethe kuyinto elungileyo?
Eli phupha libonisa isidingo sokugcina zonke iimvakalelo zakho ngaphakathi kwakho ngendlela entle. Ukuphupha kwekhabethe ngumnxeba wokuzazi, ke ngoko, ukuze uzazi ngcono. Akufanele ibonwe ngathi ayinakwenzeka okanye imbi, kuba intsingiselo iya kuba ntle.
Olunye uphawu yindlela obona ngayo el mundo, ke intsimi yakho yombono kufuneka ihlolwe. Zama ukujonga ngaphezulu kwamehlo akho, kuba oko kukukhawulela. Kukho indalo iphela engaphaya kokubonwayo, oko kukuthi, ukuphonononga konke oku kunokwenzeka kuya kuba ngumahluko.
Ubudlelwane babantu phantse buhlala bunomdla kwaye bunokubonelela ngezifundo ezibaluleke kakhulu kuye wonke umntu. Ukuphupha kwekhabethe kubonisa ukuba ezinye iimvakalelo kufuneka zisetyenziswe rhoqo kwaye ezinye azifanelanga. Ukwazi indlela yokwenza lo mahluko kuya kuxhomekeka kuphela kukhetho lwakho, Oko kukuthi, kwinto oyifunayo.
Ngaphambi kokuqhubeka kubalulekile ukuba uqaphele ukuba intsingiselo yamaphupha iya kuxhomekeka kwizinto ezininzi. Into ephambili kukukhumbula okwenzekileyo ngexesha lephupha kwaye ngakumbi imeko ezenzeka kuyo izinto. Apha ngezantsi kunokubonakaliswa okuqhelekileyo kubantu abaphuphe ngale nto.
Ukufuna ukwazi kuye kukubeka emngciphekweni wokuba abanye abantu bakhawuleze ukuba nomsindo ngawe. Kubalulekile ukuba ulumke kwaye uphephe iimeko ezinokuthi ziqhubeke zikhulisa umdla wakho wokufuna ukwazi. Zama ukuphucula indlela ozibona ngayo iimeko kwaye ufunde ukukhathalela ulwimi lwakho ngakumbi.
Beka iimpahla ezintsha
Ukuzazi kuyinto ekufuneka yenziwe ngcono nguwe, kuba inokukuzisela izibonelelo ezininzi. Into ephambili ayikukuba nomsindo ngakumbi kwabanye abantu kwaye ungalindeli lukhulu kubo. Eli phupha limele isidingo sokuzazi ngcono ukuze ungazisoli.
Khulula iimpahla ezindala ...
Ubomi bakho butshintshile kwaye kuya kufuneka uhambisane nolo tshintsho, kuba ukuhlala ngasemva ayisiyiyo indlela efanelekileyo. Ukuphupha nge-wardrobe endala luphawu olucacileyo lokuba ubunexhala kakhulu malunga nexesha lakho elidlulileyo. Yiba neenjongo ezintsha kunye nezicwangciso zale mihla, kuba ikamva likulindile kwaye kufuneka ubalasele.
Obunye ubunzima kubudlelwane bakho bunokukwenza uzive ubuhlungu malunga nemeko eyenzekayo. Ukuthatha eli thuba ukukhula ngendlela ecwangcisiweyo kubalulekile. Shiya okudlulileyo endaweni, jolisa okwangoku ukuze woyise ikamva.
Iphupha lekhabethe evaliweyo
Abanye abantu banokufihla into kuwe kwaye kubaluleke kakhulu ukuba ungazami ukuyifumana. Ngoba? Zama ukutshintsha indlela ophatheke ngayo nehlabathi, kuba abantu abasoloko bekunika into oyifunayo.
Gcina iimpahla zakho zicocekile.
Indlela eya empumelelweni iyafana kwaye ukuphupha ikhabethe evulekileyo kuyayibonisa. Zama ukuqhubeka unje kwaye unqande iihambo ezintsha, kuba ayiniki mdla. Kungekudala uya kuziphumeza zonke iinjongo zakho ngokusisigxina, kuba uzifanele zonke.
Gcina iimpahla zakho zigcwele
Iingxaki zikwenze ukuba ungabe usazi ukuba wenzeni kwaye uzimisele ngaphandle kokuphendula. Uzama ukucinga ngento enokusonjululwa kunye nokuba kungathatha ixesha elingakanani, emva koko wenze ngendlela eyiyo.
Gcina iimpahla zakho zingcolile
Intsimi yobungcali inesiphithiphithi kwaye ukuphupha ikhabethe elimdaka luphawu olucacileyo lwayo. Zama ukubetha amanqaku akho, ube nomonde wokufikelela phezulu kwaye ngaphezulu kwako konke uqhubeke nokusebenza usiya kwiinjongo zakho. Ubomi abupheli kwiveki ezayo okanye ekuqaleni konyaka ophelileyo, unexesha layo yonke into.
Gcina iimpahla zakho zilungelelanisiwe
Indlela abukhokele ngayo ebomini bakhe ichanekile kwaye umbutho yenye yamandla akhe, ngaphandle kwamathandabuzo. Ingcebiso kukuzama ukulandela le ndlela uyiyo, oko kukuthi, gcina izinto ezintle kwaye uphucule ezimbi.
Umntu ongaphakathi egumbini
Kuyinto eqhelekileyo ukufuna "ukufihla" izinto ezithile ebantwini, oko kukuthi, awukwazi ukuthetha ngayo yonke into. Ukuphupha ikhabethe kwaye umntu othile ungaphakathi kubonisa isidingo sokunika ukuhamba okungakumbi kwangaphakathi kwentliziyo yakho. Zama ukungazenzi iintloni ngakumbi kwaye ukuba kunokwenzeka ube ngumntu ovule ngakumbi.
Ngaba ukuphupha ikhabethe kuyinto elungileyo?
Ukuphupha nge-wardrobe kunentsingiselo enomdla kwaye kubonisa ukuba izinto ezintle ziza kuwe. Ukuzazi kuyinto elungileyo kwaye okukhona ukufezekisa, kokukhona kuya kuba ngcono. Zama ukulandela umendo ofanayo kwaye akukho xesha uya kuzifezekisa zonke iinjongo zakho ngaxeshanye.